Hawl-galo baaritaan ah oo laga fuliyay Beledweyn, iyo wasiirada gaashaandhiga & qorshaynta ee federaalka oo ku sii jeeda. – Radio Daljir
Baladwayne, January, 03 ? Hawl-galo xooggan oo lagu baadi-goobayo haraagii kooxda Al-shabaab iyo dadkii la shaqayn-jiray ayaa maantay ciidanka DFKS iyo kaashana kuwo Itoobiyaanka waxay ka sameeyeen gudaha magaalada Baladwayne, waxaana hawl-galkaan bar-bar socda diyaar garow loogu jiro in lagu soo dhaweeyo wafti uu hoggaaminaayo wasiirka gaashaandhiga DFKS Xuseen Carab Ciise oo ay ka mid yihiin wasiirka qorshaynt iyo saraakiil kale.
Wararka aynu ka helayno magaalada Baladwayne ayaa ku waramaya in ciidanka DFKS ay soo qab-qabteen dad u badan ganacsato, kuwaasoo lagu eedeeyay inay xiriir qoto dheer la lahaayeen kooxda Al-shabaab, halka ay jiraan kuwo lagu soo dac-weeyay inay si toos ah ula shaqayn-jireen kooxda Al-shabaab.
Dhinca kale, madaxwaynaha maamul-goboleedka Dooxada Shabeele C/fitaax Xassan ?Afrax? oo maantay shir-jaraa?id ku qabtay magaalada Baladwayne ayaa ugu baaqay dhammaan hay?adihii samafalka ee horay uga hawl-gali jiray Baladwayne inay dib gobolka ugu soo laabtaan, waxaana uu intaasi ku daray inay muhiim tahay sida ugu dhaqasaha badan in loo bilaabo hawlihii gargaarka bini?aadatinimo ee gobolka Hiiraan laga fulin jiray.